In ka badan 1500 ruux oo lagu soo qab qabtay howl galkii laga sameeyay degmada Wadajir (Sawirro) – idalenews.com
Howl gal ay ka qeyb qaateen ciidamada qalabka sida oo saacado badan qaatay, laguna qab qabtay in ka badan kun ruux ayaa laga sameeyay Xaafadaha degmada Wadajir, iyadoo howl galkan uu ahaa kii ugu horeeyay noociisa oo degmadaas laga fuliyo.
Saraakiisha hey’adaha amaanka dowladda ayaa sheegay in howl galkan ay ka qeyb qaateen Ciidamada nabadsugida, Booliska, Milateriga, waxaana wehliyay Ciidamada Booliska AMISOM.
Howl galkan oo ahaa mid gur guri laga sameeyay ayaa kumanaankii ruux ee lagu qab qabtay la isugu geeyay meel barxad ah oo ku dhow Xaafada Nasteexo, halkaasoo lagu kala soocay.
Dadka la qabtay ayaa isugu jiray Arday, macalimiin iyo Ganacsato, kuwaasoo xilli aroor hore ah oo ay guryahooda ka kalahayeen howl galka lagu qabtay.
Taliyaha Nabadsugida gobolka Banaadir Khaliif Axmed Ereg ayaa sheegay in howl galkan oo ahaa mid ballaaran ay ku qab qabteen ilaa 1,714 ruux, inkastoo markii dambe kala saaris kadib ay ku soo reebeen 114-ruux oo ah kuwo lagu tuhmayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab.
“Maanta waxaa ka howl galnay degmada Wadajir oo ah degmo aad u ballaaran, howl galkeeda muddo dheer ayuu socday ilaa sideed saacadood ayuu qaatay saaka salaadii subax ilaa hada ayuu socda, waxaa ka sameynay Xaafada Nasteexo ama Jiiro Maskiin, Xaafada Buulo Xuubey iyo Suuqa weyn ee Madiina”ayuu yiri Khaliif Ereg.
Khaliif Ereg ayaa sheegay in 1,600 ruux ay xoriyadooda dib u heleen, isla markaana ragii ganacsatada ahaa iyo ardaydii ay goobtooda shaqo iyo iskuuladooda waxbarasho u ogolaadeen, waxaana uu xusay in howl galkan uu sii soconayo.
Dhinaca kale Taliyaha Ciidamada Booliska Gobolka Banaadir Axmed Xasan Maalin ayaa sheegay in howl galkan ujeedkiisa yahay in lagu xaqiijiyo amaanka, isla markaana ay ka hortagi doonaan falalka amni darada, gacantana ku soo dhigi doonaan kooxaha nabad diidka.
Maalmihii u dambeeyay ayaa howl galada Ciidamada wada jirka ay ka sameynayeen degmooyinka Gobolka Banaadir uu ahaa mid sii kordhayay, kaasoo dad fara badan lagu soo qab qabtay.